သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels | 993.702.7574: ကို Call
MD ရဲ့ Desk ထံမှသတင်းစကား
Bhubaneswar အတွက် tempo ကို Traveller စျေး
Odisha Weekend ထွက်ပြေးဖို့
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် Tours မှ Odisha
Odisha သဲသောင်ပြင် Tours မှ
Orissa ပျားရည်ဆမ်းခရီး Tours မှ
အထည်အလိပ် Tours မှ Odisha
အိန္ဒိယ Tours မှ
Gangtok Pelling Kalimpong ခရီးစဉ်
အရှေ့အိန္ဒိယသာမန်ထက် Tour Package ကို
ကီရာလာ Extravaganza အားလပ်ရက်
ဟေးလ်စခန်းများ Extravaganza ကီရာလာ
အာသံ Tours မှ
Kaziranga Shillong ဂိုဟားသီး Guwahati ပက်ကေ့
အရှေ့မြောက်တြိဂံ Tour Packages
ဆစ်ကင်း Tours မှ
Gangtok Lachung Pelling Tour Package ကို
ကွာလာလမ်ပူ - လန်ကာဝီ
သံလိုက် packages များနှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဖောက်သည်များ၏ရမှတ်များ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုထိသော effervescent ခရီးစဉ်အော်ပရေတာ Odisha - သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels ထံမှသင်တို့ဆီသို့နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။ သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels Bhubaneswar မှာ 1993 အတွက် incepted ခဲ့သည် - ထိုကြော့မြို့တော်ယဉ်ကျေးမှုခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိပ်နှင့် Odisha အတွက် excitingly တိုးတက်သောဦးတည်ရာအဖြစ်ချီးကျူး။ သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels ရုံးများဣနြေ္ဒပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ရှိသောနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝင်စားနေကြပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဆိုပါကုမ္ပဏီ, Puri အထူး Tours မှ, အရှေ့မြောက် Tours မှ, လှေသင်္ဘော, Weekend ထွက်ပြေးဖို့, Bhubaneswar အထူး Tours မှ configuring အံ့ဖှယျခရီးစဉ်နှင့်အတူအံ့မခန်းအထုပ်ခရီးစဉ်ထွက် dishing ကဝန်ကြီးချုပ်ခရီးသွားများနှင့်ခရီးစဉ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဘောလုံးလှိမ့်ထား, Discover Mini ကိုအမေဇုံ - Bhitarkanika, Odisha ဝိညာဏခရီးစဉ်, Odisha ရွှေတြိဂံနှင့်အတူ Chilika, RathaYatra အထူး Package ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအိန္ဒိယ Gateway မှာ Odisha ရန်, Odisha, သီးသန့် Odisha လူမျိုးစု Tour, Odisha ၏သန့်ရှင်းရာဌာန ... ၏ Beach Enchanting ။ အနည်းငယ်ဖော်ပြရန်။ ပိုပြီးအများကြီးနဲ့ ... .. - Puri - - Konark ရှိပါတယ် Pre-ဒီဇိုင်းခရီးစဉ် packages များအဖြစ်ဖောက်သည်မွေ့လျော်ဖို့အတော်ကြာကျယ်အထိပေါင်းစပ် Bhubaneswar နှင့်အတူဗိမာန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာ Trail Odisha နှင့်အတူအမည်ရ Odisha လူမျိုးစု Tours မှ spanning စိတ်ကြိုက်ခရီးစဉ် packages များနှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်
အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးန်ဆောင်မှုတစ်ခုခင်းကျင်းများတွင်သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်ကွင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဘုံထဲမှာနယ်ပယ် image ကိုထွင်းထုထားပြီး မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ အများစုခေတ်မီကားများနှင့်နည်းပြတစ်ဦးသှေးဆောငျစင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်သည်၎င်း၏ဖောက်သည်အစွမ်းကုန်မွေ့လျော်ပူဇော်ဖို့အခှငျ့အရေးအဘယ်သူမျှမပိတ်သောကျောက်အရွက်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ၎င်း၏မြှားတောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ် stocks ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, Puri, Gopalpur အတွက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင် setting ကို-up, အကိုင်းအခက်တိုးချဲ့ထားပါတယ် Bhitarkanikaပိုဖောက်သည်ထွက်ရောက်ရှိဖို့ရန်၎င်း၏ထုတ်ဝေအားထုတ်မှုအတွက်ဒေလီနှင့်ကာလကတ္တား။
သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း, အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဝန်ကြီးဌာနကအသိအမှတ်ပြုသည်။ အိန္ဒိယ၏ခရီးသွားဧည့်ဖို့ရညျအသှေးခရီးစဉ်န်ဆောင်မှုများကိုအာဏာအပ်နှင်းထားတဲ့ entity အဖြစ်။ ဒါဟာအစ IATA အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ IATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI နှင့် TAAO အဖြစ်လူအများကလေးစားအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သဲကျောက်စရစ်, ခရီးစဉ်အော်ပရေတာ Odisha ၏ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပြောင်းလဲနေတဲ့ Paradigm နှင့်အတူဗျည်းအတွက်၎င်း၏ဖောက်သည်ထူးခြားတဲ့နှင့်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်ကျူးလွန်နေသည်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်၏ adroit နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအားဖြင့်စေ့စပ်ထွက်သယ်ဆောင်အဆိုပါမြတ်သောခရီးစဉ်နှင့်ဧညျ့အစီအစဉ်များ, တန်ဖိုးကိုတည်မြဲ၏ဖြစ်ဖို့အချိန်ထွက်လှည် ့. နောက်တဖန်ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်ကို catapulting ပါပြီ။ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးများ၏နယ်ပယ်မှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့မဟာဗျူဟာအပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်တွေနဲ့အမြစ်တွယ်မိုင်သွားပြီ။ အဆိုပါအလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိအသင်း, လက်မှုပညာမျှော်မှန်းလျက်, အလုပ်လုပ်တဲ့ mode သို့ထည့်လေ့မရှိ, ဖောက်သည် enthrall ရသောကွဲပြားခြားနားခရီးသွားလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ။ ဤရွေ့ကား, အရှင်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏အရသာနှင့်မျှော်မှန်းချက်မှသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့, Eco, ယဉ်ကျေးမှု, ဝိညာဉ်ရေးရာ, အားလပ်, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်ကြွက်ပါဝင်သည်။
Odisha ကမ္ဘာအနှံ့ကနေမယုံနိုင်စရာဘက်ကခရီးသွားဧည့်ရောက်လာထားပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကတည်းကအမှုအရာများ၏ထူ၌တည်ရှိ၏နှင့်တစ်နှစ်ခွဲခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးသောအရေအတွက်ကိုကိုင်တွယ်သူတို့ကိုလက်ရာမြောက်သောခရီးစဉ် packages များ, ခရီးသွားလာအကူအညီများနှင့်ထောကျပံ့ပေး။ အဆိုပါအထင်ကြီးအပေးအယူပတ်ဝိုင်းထားတဲ့အစဉ်အဆက်တိုးချဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆို, synergized လုပ်ငန်းများနှင့် Neo-အခွင့်အလမ်းများကိုအရှေ့အိန္ဒိယအတွက်ခရီးစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်အလှနျသဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်၏ရပ်တည်မှုတိုးမြှင့်ပါပြီ။ စံနမူနာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းကိုသေချာစေရန်ကုမ္ပဏီများကမွေးစားအဆိုပါယန္တရားအမျိုးမျိုးသောရပ်ကွက်ထံမှချီးမွမ်းဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Us / ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
သင်၏ Email * သင့်စာလွှာ
သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ် indomitable စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူရှေ့ဆက်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၏တန်ဆာကိုဆင် အရှေ့အိန္ဒိယ နှင့် အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယ ထူးချွန်များအတွက်ထူးခြားသော penchant နှင့်အတူရုံသဲနှင့်ကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်ကကမ်းလှမ်း chic နှင့် swanky platform ပေါ်တွင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကလုံးဝစိတ်ကျေနပ်စရာအတွေ့အကြုံများသေချာ, သင့် behest မှာဖြစ်ပါတယ်။
သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်သင်တို့အဘို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် packages များတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နှငျ့ပွညျ့စုံတစ် vivacious ခြင်းတောင်းရှိပါတယ်။ ကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, အထူးစိတ်ဝင်စားကြောင်း, ဝိညာဏ, ဘုရားဖူး, ယဉ်ကျေးမှု & အမွေအနှစ်, အပန်းဖြေ, ကြွက် ... ရှိစေသတည်း။ သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပေါ်ဖို့ကတ်များအပေါ် aplenty ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ preference ကိုအလွန်အမင်းသဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်မှာတန်ဖိုး - အခမဲ့လွတ်လပ်သောခရီးစဉ်သို့မဟုတ် Group မှ Inclusive Tour ရှိမရှိ ... ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ရှိသည်။
နှစ်တွေသဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်နေတဲ့ထိပ်တန်းထစ်ခရီးစဉ်အော်ပရေတာ Odisha နှင့်မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူအဖြစ်က၎င်း၏မြင်သာထင်သာရှိနေခြင်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
prompt ကို၎င်း၏ On-dot မှမရှိစေရန်နှင့်ဖုန်းခေါ်၏ Beck မှာကောင်းမွန်စွာစည်းရုံးမော်တော်ကားများနှင့်နည်းပြန်ဆောင်မှုများ - အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကာလအတွင်းသဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်နေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားနာမကိုအမှီအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနှင့် Odisha လူအလုံးအရင်းမှနှစျလိုဖှယျဖွစျလာခဲ့သလျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကျော်ကြားစင်းကို Mercedes-Benz, Skoda ထိပ်တန်း, Honda Civic, Toyota Corolla, ဟွန်ဒါစီးတီး, တိုယိုတာ Innova, တာတာမဲနယ်, မဟိန္ဒာ Logan, Mahindra Scorpio, Mahindra Bolero, တာတာ indica ပါဝင်သည်ရာထက်ပို 60 လေအေးပေးစက်ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ dotted ဖြစ်ပါတယ် , Tempo ကို Traveller, Mini-ဗင်နှင့်နည်းပြ။ စတီယာရင်မှာကုမ္ပဏီယူနီဖောင်း donning ကောင်းစွာ-အတွေ့အကြုံနှင့်ဧညျ့ကားမောင်းသမားဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဘာသာရေးအရယာဉ်မောင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဖောက်သည်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကြာလည်းအမြဲတစေအမူအကျင့်များ codes တွေကိုပေါ်သူတို့ကို briefs ။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းဆဲလ်ဖုန်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်မန်နေဂျာနှင့်အဆက်အသွယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နေကြသည်။
သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်ဖောက်သည်-ဖော်ရွေအစပျိုးအားလုံး၎င်း၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဓာတ်သတ္တုရေပုလင်း, အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ, icebox, တစ်ရှူးစက္ကူ, ပထမဦးဆုံးအကူအညီသေတ္တာများနှင့်ထီး၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါဝင်သည်။ လူအားလုံးတို့သည်မော်တော်ယာဉ်ထိုင်ခုံခါးပတ်များနှင့်အခြားဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး gadgets နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်နေကြသည်။ အဆိုပါကားများနှင့်နည်းပြငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို 24X7 ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
Off-the-ရိုက်နှက်-ကိုခြေရာခံကွာမြို့ပြအသက်တာ၏ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားအတူဆက်စပ် monotony နှင့် drudgery ထံမှအတွေ့အကြုံအားလပ်ရက်များအတွက် profuse ဝယ်လိုအားနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်း၌, သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ် Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဂေဟဗေဒစိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်ဖြည့်စွက်နေရာထိုင်ခင်း '' Jungle Resort ကို '' ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Bhitarkanika Odisha ၏ Kendrapara ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်အလွချောင်းနှင့်ရွှံ့တိုက်ခန်းနှင့်အတူဧည်ဒီရေတောတစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားကျက်စားရာနေရာဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယ, Bhitarkanika တွင်အကြီးဆုံးရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဒီရေတောဂေဟစနစ်တစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ သဲကျောက်စရစ်တော Resort ကိုအဆိုပါခရီးသွားဧည့်အတွက်သဘောသဘာဝနှင့်အတူတညီတညှတျတညျး၏ခံစားချက်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုပျားရည်ဆမ်းခရီး၏ခရီးစဉ်အတွင်း '' ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေရမည် '' ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်နေတဲ့ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားအေးဂျင့်အဖြစ်အနေနဲ့ indelible အမှတ်အသားဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကုမ္ပဏီအတွက်ကြွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို 'အနာဂတ်၏ Ace' 'အဖြစ်ကြေညာသည်။ သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည်တာကိုပိုမိုနီးကပ်စွာစီးပွားရေးနှင့်အပန်းဖြေတတ်၏။ Odisha အမှန်တကယ် Aspire နှင့်ဆွဲဆောင်ကြွက် destination သည်နှင့်စိတ်အားထက်သန်ကြွက်ဈေးကွက်ကိုအသာပုတ်ရန်, သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်ထူးထူးအပြားပြားအစီအစဉ်များကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ Excellent ကကွန်ယက်အလားအလာ, ပေးသဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဟိုတယ်အခန်းပေါင်းဖွပန်းကန်ထဲကအစိတျကို-မှုတ်ခရီးစဉ်နှင့်, ဧည့်သည်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အပန်းဖြေလွယ်ကူချောမွေ့။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်၏စစ်မှန်သောန်ဆောင်မှုများမကြာခဏဖြစ်ရပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်ဖို့ခညျြနှောငျနေကြသည်။
သဲကျောက်စရစ်ပွဲများ 'n' Entertainment ကအုပ်စု, သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် 'n' တစ်ယူနစ်သွားလာအိန္ဒိယခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း, အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များကအသိအမှတ်ပြုသည်။ အိန္ဒိယနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း, အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဦးစီးဌာန၏။ Odisha ၏။ Bhubaneswar - ဤတောင်ပံ Odisha ၏မြို့တော်မှာအခြေခံသည်။ အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ရပ်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးအဖြစ် teeming ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး upswing Odisha အတွက်ဖြစ်ရပ်များ '' စီးပွားရေးရှိပါသည်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်နိုင်ငံတော်အတွက်အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ Gala အောင်မြင်မှုမိတ်ဖက်ဖြစ်ဂုဏ်ယူသည်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်လိုလားသူတက်ကြွလုပ်ရပ်တွေဟာနှင့်အတူပွက်ပွက်င်း၏စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်ထွဋ် Tower ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။ ကုမ္ပဏီများ၏အဓိကရည်မှန်းချက်တန်ဖိုးကို-based, ဖောက်သည်-oriented အစပျိုးအာရုံစိုက်နေဖြင့်ယင်း၏လူအများကလေးစားဖောက်သည်ခြွင်းချက်န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်အလွန်အမင်းသိကောင်းစရာများနှင့်ပြည့်စုံသောဘရိုရှာနဲ့အတော်လေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံပေါ်သောအခြားမြှင့်တင်ရေးစာပေထုတ်ဝေသည်။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်၏အထူးအကျိုးစီးပွား packages များ Odisha အတွက်တိုင်းရင်းသားလဒ်တက် Spruce ။ ဒါဟာလူမျိုးစုခရီးသွားလုပ်ငန်း Charm ထောက်ခံနှင့်ခရီးသွားဧည့် Odisha ၏လူမျိုးစုတို့ကထောကျခံခဲ့သည့်ထူးခြားတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူရင်းနှီးဆုံရပ်ရှိသည်ဖို့အတှကျအခှငျ့အလမျး galore ။ ကုမ္ပဏီ၏လူမျိုးစုခရီးစဉ် packages များပြည်နယ်များ၏တိုင်းရင်းသားလူမျိုး၏အထူးအရသာမိတ်ဆက်; သူတို့ရဲ့ထုံးတမ်းများနှင့်အကောက်ခွန် invigorating ။ ခရီးသွားဧည့်ကွဲပြားအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်း entailing ထူးခြားတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်ဆင်နွှဲသောထိုသူတို့၏ရောင်စုံပွဲတော်များသက်သေခံရန်လုံလောက်သောနည်းလမ်းပေးနေကြသည်။ Odisha လူမျိုးစုအသိုင်းအဝိုင်း၏အကြီးဆုံးအမျိုးမျိုးရှိခြင်းများအတွက်အိန္ဒိယရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုမြေပုံအတွက်သိသာထင်ရှားသောအစက်အပြောက်အစက်။ လူမျိုးစုများ၏အများစု Koraput, Rayagada, Naurangpur, Malkangiri, Kalahandi, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, Sundargarh နှင့် Mayurbhanj ၏ခရိုင်၌တွေ့နေကြပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ်လူမျိုးစု Tours မှထိုအမှုရှိသမျှသောအရပ်တို့ကိုလွှမ်းခြုံနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ဗေဒပညာရှိများနှင့် scintillating အသုံးအနှုန်းတွေကိုဖမ်းယူ။ အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုလှုံ့ဆော်မှုခရီးသွားဧည့်သည်, သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်မထားဘဲ packages များပေးပါသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ပွဲတော်ကုမ္ပဏီ၏ဂန္ခရီးစဉ်အတွက်ကို configure ။ ခရီးသွားဧည့်ပွဲလမ်းသဘင်ရာသီကာလအတွင်း Odisha များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဟော့စပေါ့များသောကြောင့်အသံတစ်ဦးတစ်သက်တာအခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းအသရေနှင့် ecstasy ထိုကဲ့သို့သော Puri အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဲသောင်ပြင်ပွဲတော်အဖြစ်အကြီးမားဆုံးယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များကို၎င်း, Konark ပွဲတော်အတွက် regal ဘုန်း relive မှခရီးသွားဧည့်များအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးသွားနိုင်။
Odisha အများအပြားတစ်ခုဖော်ကျူးရသေးတဲ့ကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Destinations ရှိပါတယ်။ အပြင်ကဤယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ခရီးသွားနေရာများများ၏ဣနြေ္ဒအလှတရားကနေဘယျအရာခရီးသွားဧည့်သွေးဆောင်သည့်သမိုင်းဝင်တဲ့, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတွေ, ဘာသာရေးသင်္ကေတများနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနအရေးပါမှုဖြစ်ကြသည်။ Odisha ကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ငုပ်လျှိုးနယ်ပယ်သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်၏အထူး packages များအားဖြင့်တူညီမှုများပျက်စီးနေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Raghurajpur အဖြစ်ကျေးလက်နေရာများအတွက်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်အရေးပါမှုညီ။ ဒါဟာကျေးလက်ဒေသလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများဌာနေလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးတည်လှည့်ခရီးသည်များအတွက်ဆှဖှေဲ့တစ်ဦးခံစားချက် instills နှင့်၎င်းတို့၏ထင်ရှားသောများအတွက်လမ်းဖြစ်လာပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်ပိုပြီး '' ရင်းနှီးသော 'နှင့် Odisha ၏ဌာနေလူတို့နှင့်အတူ' 'စစ်မှန်' 'အဆက်အသွယ်ရှာကြာလော့။ သဲကျောက်စရစ်ခရီးစဉ်၏ packages များထိုကဲ့သို့သောစပါးလယ်ကွင်း, ဥယျာဉ်များ, တောင်ကုန်းပ္ပံ၏ရှုခင်း captivating, အိမ်အမျိုးမျိုးနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအဖြစ် scintillating အမြင်များဖေါ်ပြခြင်းကဤပွညျထောငျစုအတွက်ရွာမြင်ကွင်းကျယ်လွှမ်းခြုံဂျေဟာခန်းပြည်နယ်မှာ, Madhya Pradesh နှင့် Chhattisgarh တူသော Odisha နှင့်အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များ configuring ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည် ငှက်, ပွဲတော်များ, မယ် ... ။ နှင့်စာရင်းပြည့်စုံစေ့စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား reservation ပေါ်လစီ ဖျက်သိမ်းခြင်းပေါ်လစီ သတင္းေၾကျငာခ်က္ သက်သေခံချက် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ရွာေဖြလမ္းညႊန္ E-Broucher
သဲကျောက်စရစ် Tours မှ© 2019 ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
သတင္းေၾကျငာခ်က္ သက်သေခံချက် ဆက်သွယ်ရန်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ reservation ပေါ်လစီ ဖျက်သိမ်းခြင်းပေါ်လစီ ရွာေဖြလမ္းညႊန္ E-Broucher
© 2019 သဲကျောက်စရစ် Tours မှ။
အမည် * တယ်လီဖုန်း *